Igwe na-ama jijiji
Gbaa ịnyịnya-on Vibratory ala
Iduzi Ugboro abụọ-Drum Vibratory ala
Ugboro abụọ-Drum Vibratory Roller
Sing-Drum Vibratory ala
Na-eje ije-n'azụ Power Trowel
Ngwa Marking Road
Ngwongwo Ogwe ígwè
VR maka ụlọ ọrụ na-emepụta ihe
Ngwunye efere nke a ma ama na Romania na-emeju ụkpụrụ EU niile
Na-ewu, e nwere isi ihe atọ na ụdị compactor: efere, rama, na ụzọ ala. Na Ace-igwe lekwasịrị anya na rama na efere, taa anyị chọrọ ịme mkpirikpi iwebata banyere kọmpụta efere. Na England aha “wacker plate” ma ọ bụ naanị “wacker ...
Igwe dịpụrụ adịpụ nwere uru.
Na mmepe nke teknuzu, ugbu a igwe nwere smart nlereanya na mgbe ụfọdụ ọ nwere ike na-enye mma ojiji karịa omenala otu. Ugbu a ụlọ ọrụ anyị na-eme igwe ọhụrụ maka ịrụ ụzọ. Ọ bụ otu ụdị nke trowel ike. Ọ na-ese ntakịrị dị iche na anyị nkịtị igwe wh ...
Ike Trowel ngwaahịa ndị ama ama na igwe arụ ụzọ.
Trowels anyị na-agbakwunye usoro anyị dị ugbu a n'ụzọ dị ukwuu, na-ejikọ usoro niile site na mkpakọ ala na ala ndị na-egbu maramara, ma daba nke ọma na atụmatụ nkewa anyị iji bulie azụmaahịa anyị na ala anyị. Na mgbakwunye nke ndị na-agba ịnyịnya-na trowels anyị ga-enwezi comp ...
Mmiri mgbapụta engine họrọ na ngwaahịa na-egosi
Mgbapụta bụ ngwaọrụ nke na - eme mmiri (mmiri ma ọ bụ gas), ma ọ bụ mgbe ụfọdụ slurries, site na ọrụ igwe, na - agbanwe site na ike eletriki n'ime ike Hydraulic. Enwere ike ịdenye nfuli n'ime atọ dị iche iche dịka usoro ha na-eme iji mee ka mmiri ahụ gaa: ebuli, mbugharị, ihe ...
The History na Type of ihe igwekota
Onye na-agwakọta ihe (nke a na-akpọkarị aha igwekota ciment) bụ ngwaọrụ nke na-ejikọta ciment, mkpokọta dịka ájá ma ọ bụ gravel, na mmiri iji mepụta ihe. Otu ihe eji eme ihe eji eme ihe na eji ihe eji emeghari ihe ndi ozo. Otu n'ime ndị mbụ ihe igwekota mgbe e mepụtara na 19 ...
Mgbakwunye maka Mini Excavator iji rụọ ọrụ ka mma
Obere ndi na-achoputa ndi na-achoputa ihe ndi mmadu na-achota ha site na ebe ndi oru ha, ha nwere ike iga ebe igwe kariri. Obere ihe eji egwu mmiri dị mma maka ịrụ ọrụ n'azụ ụlọ, n'ime ụlọ na gburugburu ogige maka igwu ala, ibuli na nhicha. M DIGGER bọket ọkọlọtọ gwuo ụwa maka ọtụtụ ebumnuche, ...
Ihe Ngwakọta Kwesịrị Ekwesị na-egbo mkpa maka ndị ọrụ njedebe
N'ime afọ 2020 gara aga, igwekota igwekota ahụ bụkwa ngwaahịa kachasị ere na ụlọ ọrụ anyị, anyị nwere ike ịnye nha dị iche na Mini (80L) ruo ụgbọala (4.3 CBM). Na ndị ahịa anyị niile chọrọ ịrụ ọrụ ka mma. Na dị ka onye na-ebubata ngwaahịa, ngwaahịa ndị ahụ dabere na akụrụngwa na ọrụ dị mma. Ya mere na ...
Uru nke Mini excavator
N’adịghị ka ndị na-egwupụta ihe n’ogologo, ndị na-egwupụta obere mini na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ọ na-abata n’ihe ndị nwere oghere. Mgbe ọ bụla ọkachamara chere na ha enwechaghị ohere iji rụọ ọrụ ha, ọ na-akara ha mma iji obere ndị na-egwupụta ihe. Enwere ọtụtụ ọrụ enwere ike iji mini excavator rụọ ọrụ. Ndị a ...
Daalụ nke ukwuu maka nkwado gị na ntụkwasị obi gị na 2020
Ezigbo Onye Mmekọ m, Oge dị ka akụ, na ọ bụ afọ ọhụrụ ọzọ. N’oge pụrụiche, ndị ọrụ anyị niile ga-achọ igosipụta ekele anyị si n’obi na ezigbo ọjị. Daalụ maka ịbụ ndị ahịa anyị bara uru. anyị nwere obi ụtọ maka obi ụtọ ijere gị ozi na igbo mkpa gị. Ningb ...
Mfe ebu ihe vibrator nke ona maka ezinụlọ na-ewu ụlọ
Maka ụfọdụ mpaghara ọrụ anyị na-eji ihe eji eme ihe mgbe niile iji mee ka ciment zere ihu na mmanụ aeyụ. Na n'oge na-arụ ọrụ oge anyị ga-ahụ ụfọdụ igwe dị oke ibu na-ebu nke-eme mgbe ị chọrọ ime a obere oru ngo i nwere ike ichefu eme ka a igwe na-emecha mee ụfọdụ na-ezighị ezi pl ...
Onye na-ebupụ onye na-ebupụ ihe na onye na-eme ihe na-emepụta ihe ọhụrụ
Ndewo onye ọ bụla nke a bụ Alex si Ningbo ACE igwe. N’izu a, aga m enwe nkenke iwebata banyere ụlọ ọrụ anyị na ụlọ ọrụ anyị. Achọpụtala ụlọ ọrụ anyị na 1996 nke nwere ihe karịrị afọ 24 na ahụmịhe azụmaahịa. N'oge a, anyị na-agbanwe igwe site na ...
Stdị Ọhụrụ na Injin maka Mini Excavator
ụdị nke ọgbara ọhụrụ nwere kọmpat, na-arụpụta ma bụrụ nke ejiri onye ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma. Igosipụta ọgbọ nke Yanmar nke na-esote 12.9hp 3TNV70-VBA2 injin mmanụ dizel, SV18 na-anapụta torque 51.4nm na 1,500rpm. Ndị na-arụ ọrụ dị ike ma dị irè, ndị ọrụ na-erite uru site n'oge okirikiri na-eduga oge, ...